Izindaba - Izintelezi zensimbi ephezulu
Izintelezi zensimbi ephezulu
Ungathanda ukwenza izintelezi zensimbi ezisezingeni eliphakeme kuzinsiza zakho? Sicela uze uzosijoyina, Izipho Ezinhle Ezicwebezelayo zizofeza isifiso sethu futhi zilethe umbono wakho empilweni yangempela.
Sinikeze ngemiklamo emikhulu evulekile yemigexo elengayo, namasongo izintelezi, izintelezi zesilwane, Umhlobiso kaKhisimusiongakhetha kukho, okuzokonga isikhunta sakho, futhi ngasikhathi sinye, ukwakheka ngokwezifiso nakho kwamukelekile kakhulu. Kunemiklamo ehlukahlukene yemichilo enezinto ezahlukahlukene, ukuthungwa, nombala okutholakalayo. Sinesiqiniseko sokuthi luzokwenza usuku lwakho ngentelezi ye-DIY ezinsizeni zakho, njengokubekisa, ukufaka i-earing, i-pendant, i-wristband, izintelezi zewayini, i-smart phone, izimoto nokuningi.
-Izinto ezibonakalayo: ifa i-zinc alloy noma i-pewter, ifa yashaya ithusi noma i-iron, i-aluminium
-Umbala: okwenziwe ngokwezifiso kufaka umbala ocacile ogcwele, ukuphrinta okuhlukahlukene
-Ukuqedela: igolide elicwebezelayo / isiliva / i-nickel / ithusi, i-nickel emnyama, ukuphela kwe-matt noma i-antique
-Fitting: nokufakwa ahlukahlukene ayatholakala
-MOQ: 100pcs / design
-Packing: ejwayelekile poly bag noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ngaphandle kokuqeda okujwayelekile, futhi sinayo i- Izinsimbi zokhiye zokhiye zokuphrinta ze-UVokuyimikhiqizo yethu yemikhiqizo emisha sha. Le yinhlanganisela emangalisayo enamalogo ensimbi e-3D abekwe kusizinda sombala esigcwele. Yenza umklamo wakho uthandeke futhi ubambe iso.
Ngendawo yethu yokukhiqiza engaphezu kwamamitha-skwele angama-64,000 kanye nabasebenzi abanolwazi abangama-2500 kanye nemishini eyanele nethuthukile, singumkhiqizi onolwazi osebenza ngentelezi eyenziwe ngokwezifiso, izikhonkwane, izinhlamvu zemali, ama-cufflinks, imigoqo yothayi nezinye izinto zokuphromotha ezineminyaka engaphezu kwengu-3.
Ufuna ukwazi okwengeziwe ngezintelezi? Sicela uthumele imibono yakho yokuklama nosayizi, imininingwane yobungako ku-sales@sjjgifts.com, singadlulisa ama-logo wakho wangokwezifiso kumikhiqizo emihle kakhulu.